Author Topic: ကိုကိုထွန်းအေးတင်တဲ့ဟာသများ (Read 243314 times)
« Reply #580 on: September 08, 2011, 02:09:25 PM »
" ကျည် ဆန် ကုန် ပြီ "
ကောင်းဘွိုင်ကို ရက်အင်ဒီးယန်းတွေ လိုက်သည် ။ သေနတ်နှင်ပစ်ရင်း ကောင်းဘွိုင်
ပြေးသည် ။ နောက်ဆုံးတွင် ခြောက်လုံးပြူး`၌ ကျည်တစ်တောင့်သာ ကျန်တော့သည် ။
" ငါ ကိစ္စချောမှာ သေချာပြီ " ဟု ကောင်းဘွိုင်တွေးပြီး မထူးတော့ဟု ဆုံးဖြတ်ကာ
သေနတ်ပြောင်းကို နားထင်နား တေ့ လိုက်သည် ။ ကိုယ်စောင့်နတ် တိုးတိုးလေး ပြောသည်။
" ကိစ္စမချောသေးဘူး.. ကျန်တဲ့ ကျည်နဲ့ရက်အင်ဒီးယန်း ခေါင်းဆောင်ကို ပစ်လိုက် "
ကောင်းဘွိုင် သေသေချာချာ ချိန်ပြီး ပစ်လိုက်သည် ။ လူရိုင်းတွေ၏ အကြီးအကဲ
မြင်းပေါ်က ကျသည် ။ ကိုယ်စောင့်နတ် တိုးတိုးလေး ထပ်ပြောသည် ။
" အခုမှ ကိစ္စ ချောမယ်...ပြင်ထားပေတော့.. "
« Reply #581 on: September 09, 2011, 03:28:53 PM »
" မ တီး ဘူး "
မိခင်က သားဖြစ်သူ ပီတာလေးကို ပြောသည် ။
" သားလေးက လိမ္မာပါတယ်ကွယ်....၊ မေမေ့ကိ်ု စန္ဒရားတီးပြနော်..
သားတီးပြရင် မေမေ သားကို ရေခဲမုန့်တစ်ခွက် ၀ယ်ကျွေးမယ်
" ဟင့်အင်း မေမေ ။ ဖေဖေက သား စန္ဒရား မတီးဘူးဆိုရင် ရေခဲ
နှစ်ခွက် ၀ယ်ကျွေးမယ်လို့ကတိပေးထားတယ် "
" ကု သိုလ် ရ တဲ့ အ လုပ် "
ပီတာလေး ကျောင်းမှ ပြန်လာသည် ။ ခါတိုင်းထက် ပျော်ရွှင်သည့်ပုံ
ပေါက်နေသဖြင့် အမေက မေးသည် ။
" သား..ဒီနေ့မင်းရဲ့ အမူအရာ ထူးခြားနေပါလား. "
" ကျနော် ဒီနေ့ကျောင်းမှာ ကုသိုလ်ရတဲ့အလုပ် တစ်ခု
" ဟုတ်လား...ဘာလုပ်လိုက်သလဲ "
" အတန်းထဲက ကောင်လေးတစ်ယောက် ဆရာ ထိုင်မဲ့ခုံမှာ
သံတစ်ချောင်း ရိုက်ထားတယ်... "
" အဲ့ဒီ့တော့ ဘာဖြစ်သလဲ "
" ဆရာ ထိုင်မယ်လုပ်တော့ ကျနော် အဲ့ဒိ ကုလားထိုင်ကို ဆွဲဖယ်
« Reply #582 on: September 09, 2011, 03:38:42 PM »
" မ ကျေ နပ် ဘူး "
ကျောင်းမှ ငိုယိုပြီးပြန်လာသော သမီးကို အမေက မေးသည် ။
" ဟဲ့ ..သမီးလေး..ဘာဖြစ်လို့ငိုပြီး ပြန်လာတာလဲကွယ့် "
" တော်ပြီ....ကျောင်းမသွားတော့ဘူး "
" မေမေ မေးတာ ဖြေပါဦး...ဘာဖြစ်လာတာလဲ "
" သမီးဆံပင်က အညိုရောင် ဖြစ်နေတာကို ကြည့်ပြီး တစ်တန်းထဲသားတွေ
၀ိုင်းရယ်ကြလို့"
" ဒါများ..အရေးလုပ်လို့ ကွယ်... သမီး သိထားရမှာက တို့ ဆီမှာ ရှိတာ
မှန်သမျှ ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်အရ ဖြစ်ရတာကွယ့်.. သမီးရဲ့ အညို
ရောင်ဆံပင်ကို ဘုရားသခင်က ပေးထားတာကွယ့်.. "
" အဲ့ဒီလိုဆိုရင်.. ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကို မသွားတော့ဘူး. "
« Reply #583 on: September 09, 2011, 03:50:19 PM »
" စိတ် ၀င် စား မှု "
အသက် ၅၀ ကျော်ပြီ ဖြစ်သော်လည်း အပျို ရှုံးလောက်အောင် အလှပြင်ပြီး
ပွဲလမ်းသဘင်များသို့တက်သွားနေသည့် အန်တီမြက ၄င်း၏ သူငယ်ချင်းမ
ကို မေးသည် ။
" ဒီနေ့ဧည့်ခံပွဲမှာ အိုင့်ကို တစ်ချိန်လုံး ကြည့်နေတဲ့ လူကို ယူ သိလား "
" သိတယ်.. ရှေးဟောင်းပစ္စည်း အရောင်းအ၀ယ် လုပ်တဲ့လူ "
" န ဂို အ တိုင်း "
မိန်းမ နှစ်ယောက် ဆုံကြသည် ။
" ဟဲလို မေရီ... ဘယ်က ပြန်လာတာလဲ "
" အလှပြင်ဆိုင်က "
" ဘာလဲ ..ဆိုင်ပိတ်ထားသလား "
« Reply #584 on: September 13, 2011, 12:53:50 PM »
" တစ် ပတ် မ ရိုက် နဲ့"
တစ်နေ့ကိုချူချာ မော်စကိုမြို့ လယ်ကောင်ရှိ ရင်ပြင်နီတွင် လမ်းလျှောက်နေသည် ။
" စပတ်စကီး မျှော်စင် " ရှိ နာရီကြီးကို ရပ်ပြီး ကြည့်သည် ။ လူတစ်ယောက် ရောက်လာ
ပြီး မေးသည် ။
" ဘာလဲ .. နာရီကို သဘောကျနေတယ် ထင်တယ်.. "
" ဟုတ်တယ်.. "
" လိုချင်သလား "
" ဒေါ်လာတစ်ထောင်ပေး.. ဒီမှာ ခဏ စောင့်နေ.. လှေကားကို ငါပြေးယူလိုက်ဦးမယ် "
ဒေါ်လာ တစ်ထောင်ယူပြီး ထွက်သွားသည် ။ သုံးနာရီ ကြာသွားသည် ။ လှေကားသွားယူသူ
ပေါ်မလာချေ..။ အလိမ်မိပြီဟု ကိုချူချာ သဘောပေါက်သွားသည် ။ ရွာသို့ ပြန်ရောက်သော
အခါ ဤအကြောင်းကို မိတ်ဆွေများအား ပြောပြသည် ။
ကိုချူချာ ၏ ညီ မော်စကိုသို့ ရောက်လာသည် ။ ရင်ပြင်နီသို့သွားပြီး မျှော်စင်ပေါ်က
နာရီကို အစ်ကိုဖြစ်သူအတိုင်း ရပ်ကြည့်သည် ။ လူတစ်ယောက် ရောက်လာပြီး မေးသည် ။
" ကြိုက်သလား "
" ကြိုက်တယ် "
" လိုချင်တယ် "
" အဲ့ဒါဆို .ဒေါ်လာ တစ်ထောင်ပေး..။ ရမယ်..။ ကိုင်း..ဒီမှာ ခဏ စောင့်နေ..။ ငါ လှေကား
" ကိုချူချာ.. မထုံဘူးနော်...။ တစ်ပတ်ရိုက်လို့မရဘူး..။ ရော့ပိုက်ဆံယူပြီး ဒီမှာစောင့်
ငါ ကိုယ်တိုင် လှေကား သွားယူမယ်.. "
« Reply #585 on: September 13, 2011, 12:58:54 PM »
" ကံ များ ဆိုး ချင် တော့ "
စက်ချို့ ယွင်းပြီး ခရီးသည်တင် လေယာဉ်ကြီး အောက်သို့ ထိုးဆင်းလာသည် ။
ခရီးသည် တစ်ယောက်က ဘေးမှာ ထိုင်နေသော အခြား ခရီးသည်ကို မေးသည် ။
" ပြတင်းပေါက်ကနေ ကြည့်လိုက်စမ်းပါ..။ အောက်မှာ တောင်တွေချည်းပဲလားဟင် "
" ဟင့်အင်း...ပင်လယ်ကြီး.. "
" ဘုရား..ဘုရား..ကျုပ်တို့ တစ်တွေ ရေလည်း နစ်ကြဦးမှာပါလား... "
« Reply #586 on: September 13, 2011, 01:11:48 PM »
" ချူ ချာ စစ် သား "
တပ်ကြပ်ကြီးက ရဲဘော်ချူချာကို ပြောသည် ။
" ရဲဘော် ချူချာ ငါ တစ်နာရီလောက် အိပ်လိုက်ချင်တယ်.. တကယ်လို့ဗိုလ်ချုပ် လာတယ်ဆိုရင်
ငါ့ကို နှိုး ကြားလား. "
တစ်နာရီ ကြာသွားသည် ။ တပ်ကြပ်ကြီးက မေးသည် ။
" ဗိုလ်ချုပ် လာသွားသလား "
" ဟင့်အင်း "
" အေး..ဒါဆို ငါ နောက်တစ်နာရီလောက် အိပ်လိုက်ဦးမယ် ။ ဗိုလ်ချုပ် လာတာတွေ့ ရင် င့ါကို ချက်ချင်း
နောက်တစ်နာရီ ကြာသွားသည် ။ တပ်ကြပ်ကြီး မျက်လုံးဖွင့်ပြီး မေးသည် ။
" အေး.. ငါ ခဏ ဆက် အိပ်လိုက်ဦးမယ် ။ လာရင်တော့ သိတဲ့အတိုင်းပေါ့.. ဟုတ်လား "
ဗိုလ်ချုပ် ရောက်လာသည် ။ ရဲဘော်ချူချာက လှမ်းမေးသည် ။
" ခင်ဗျား ဗိုလ်ချုပ်လား "
" ခင်ဗျား ဘယ်လျှောက်သွားနေသလဲ.. ဆာဂျင်က ခင်ဗျားကို အိပ်ပြီး စောင့်နေတာ သုံးနာရီ
« Reply #587 on: September 15, 2011, 01:39:26 PM »
" ချစ် ရ ပါ သော် လည်း "
ကမ္ဘာကျော် အဆိုတော် ရုပ်ရှင်မင်းသား ဖရန့် ဆီနာထရာ ၏ တစ်ကိုယ်တော် ဖျော်ဖြေပွဲတွင်
ဖြစ်သည် ။ မိမိ၏ ဘေးက ထိုင်ခုံအလွတ်ကို ညွှန်ပြကာ တစ်ခုံကျော်တွင် ထိုင်နေသော အမျိုးသမီး
ကို အမျိုးသားက ဤသို့ပြောသည် ။
" ဘေးမှာ ခုံလွတ်နေတာကို မြင်ရတာ ထူးဆန်းသလိုပဲ..။ ဖျော်ဖြေပွဲလက်မှတ်တွေအားလုံး
အချိန်အတော်ကြာကတည်းက တစ်စောင်မကျန် ရောင်းပြီးသားလို့ကျနော် ထင်ခဲ့မိတယ် "
" ရှင် ထင်တဲ့အတိုင်း အမှန်ပါပဲရှင်...။ ကျမယောင်္ကျားနဲ့ကျမ ဒီပွဲအတွက် လက်မှတ် နှစ်
စောင်ကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ လ က ၀ယ်ခဲ့တာပါရှင် .... ဒါပေမဲ့ ကံမကောင်းချင်တော့ ကျမ
ယောင်္ကျား ကွယ်လွန် သွားပါတယ်.. "
" စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ...ဒါပေမဲ့..ဒီလို ကြုံတောင့်ကြုံခဲ ပွဲမျိုးမှာ ဆွေမျိုးသားချင်း ဖြစ်ဖြစ်
မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းထဲက ဖြစ်ဖြစ် တစ်ယောက်ယောက်ကို ခေါ်ခဲ့ရင်လည်း ဖြစ်သားပဲ
လက်မှတ် မဆုံးတော့ဘူးပေါ့ဗျာ "
" ဒါတော့ မဖြစ်နိုင်လို့ ပါ.။ သူတို့ အားလုံး ကျမယောင်္ကျားရဲ့ အသုဘ ကို လိုက်ပို့ နေကြတယ်
« Reply #588 on: September 15, 2011, 01:47:50 PM »
" ချူ ချာ့ မျက် မှန် "
မချူချာ မျက်မှန်တစ်လက် ၀ယ်ပြီး နဖူးပေါ် ချိတ်ထားလိုက်သည် ။ အသိများက
၄င်းကို ၀ိုင်းပြောကြသည် ။
" မျက်မှန်ကို ဘာဖြစ်လို့နဖူးပေါ် ချိတ်ရတာလဲ.. မျက်မှန်ဆိုတာ ပိုမြင်ရအောင်
မျက်စိမှာ တပ်ရတာ မဟုတ်လား "
" ငါက မျက်စိ ပိုမြင်ဖို့မဟုတ်ဘူး.. ။ စိတ်ကူးစိတ်သန်းပိုကောင်းချင်လို့နဖူးပေါ်
« Reply #589 on: September 15, 2011, 01:58:44 PM »
" မယ် ဒ လင် ဆ ရာ "
ည အချိန်ဖြစ်သည် ။ အရှိန်ဖြင့်မောင်းလာသော " မော်စကိုဗစ်ခ်ျ " ကားကို ယာဉ်ထိန်းရဲ
တားလိုက်သည် ။ ကားထဲကြည့်လိုက်သောအခါ ဒရိုင်ဘာ အပါအ၀င် စုစုပေါင်း လူ ၁၆ ယောက်
လိုက်ပါလာသည်ကို တွေ့ ရသည် ။ ပြီးတော့ အားလုံးမှာ ထွေ နေကြပြီ ဖြစ်သည် ။ လေးယောက်
စီးကားထဲ ၁၆ ယောက်တိတိ ပြွတ်သိပ်ပြီး လိုက်လာသည်ကို ကြည့်ပြီး ယာဉ်ထိန်းရဲ အကြီးအကျယ်
အံ့သြသွားသည် ။ ကိုယ့်မျက်စိကိုယ် မယုံနိုင်အောင် ဖြစ်သွားသည် ။ ဒဏ်ရိုက်ရန် ဖြစ်သော်လည်း
မရိုက်ပဲ မနက်ဖြန် ဆယ်နာရီ တိတိတွင် ဤလူအတိုင်း ကားနှင့် ပြန်လာကြရန် မှာလိုက်သည် ။
နောက်နေ့ မနက်တွင် သူငယ်ချင်းများ ကားထဲဝင်ကြသည် ။ ၁၅ ယောက် ကားထဲ ရောက်သွား
သည် ။ နောက်ဆုံးတစ်ယောက်သာ ဘယ်လိုပဲ ကြိုးစား ကြိုးစား ၀င်မရပဲ ဖြစ်နေသည် ။ ဒရိုင်ဘာ က
" ဟေ့ကောင်.. မနေ့ က ငါတို့ နဲ့မင်း မပါဘူး ထင်တယ်.. "
မ၀င်နိုင်သူက မကျေမချမ်းဖြင့် ပြန်ပြောသည် ။
" မပါဘူး ဟုတ်လား... ကားထဲမှာ မင်းတို့ ကို မယ်ဒလင်တီးပြီး ဖျော်ဖြေတာ ဘယ်သူလဲကွ "